Amazwi KaFebhuwari | Isimo Sezulu Senethiwekhi
NgoFebhuwari, inyanga yesibili futhi emfushane kunazo zonke onyakeni. Futhi kungenye yezinto ezithakazelisa kakhulu ngokubuka kwesimo sezulu, ngoba ngendlela efanayo kungaba nesibhakabhaka esihle esikhanyayo njengesiphepho esinamandla. Kuyashisa futhi kuyabanda. Abalingisi abaphezulu kakhulu bamasonto amane abazodaya izindawo namadolobha anemibala ehlukahlukene.
Kepha ubuhlakani obudumile buthini ngesimo sezulu kule nyanga? Ake sazi. Ake sibuyekeze i- izisho zika febhuwari okulondolozwe kuze kube namuhla.
UFebruwari unedumela elibi kakhulu; Akumangalisi ukuthi amazinga okushisa avame ukuba phansi ezingxenyeni eziningi zezwe, okuphoqa abangaphezu koyedwa ukuba bazivikele ngezingubo ezibandayo ngisho nangejazi. Isimo sezulu kule nyanga sisikhumbuza ukuthi sisesikhathini esiphakathi nobusika nokuthi, noma ngabe sithanda kakhulu noma sithanda kancane, intwasahlobo isenokuncane okuzayo.
NgoFebhuwari isimo sezulu sasingaqinisekile: Iqiniso. Kungenzeka ukuthi, ngokushesha nje lapho uvuka, uzobona isibhakabhaka esicwebile, kodwa njengoba usuku luqhubeka kuvamise ukwenzeka ukuthi liguqubele.
UFebhuwari uhlehlisiwe kunoJanuwari: Kuyaye kuthiwe uma ngokwesibonelo ngoJanuwari lina kakhulu, ngoFebhuwari ngeke line kangako.
UFederico omfishane, ngolunye usuku mubi kunezinye: Isizathu esingakanani yena! Noma ngabe uyabanda noma cha, akukho ngenyanga okumele uzivikele ngayo nangoFebhuwari. Ngeke wazi ukuthi ungagcina unemikhuhlane nini, futhi nezinguquko zesimo sezulu ezenzeka kule nyanga ... kungcono ungazifaki engozini.
Isikhathi esibi sikaFebhuwari nesikhathi esihle: Ukukha ipickick kungabonakala kuwumqondo omuhle, kepha uthola ukuthi isimo sezulu sishintsha ngokuzumayo.
NgoFebhuwari isihlahla se-alimondi sesivele sinayo imbali: Ngalenyanga umuthi we-alimondi uvame ukuqhakaza, ngisho nangaphambilini uma kuwubusika obuncane, okuthi, yize kungabonakala ngenye indlela, kungabi uphawu lokuthi intwasahlobo iyasondela.
NgoFebhuwari, ukhohlisayo: isikhathi sezimbali sisekude, njengoba isimo sezulu sangoFebhuwari kungelula ukusibikezela. Amaqhwa amakhulu asengaba khona ezingxenyeni eziningi zezwe, ngakho-ke akukho okunye ongakwenza ngaphandle kokubuyekeza izibikezelo kaningi ngosuku.
Imbali kaFebhuwari ayiyi esitsheni sezithelo: kungani? Ngoba kuvame ukuba yiqhwa ngaphambi kokuba isinambuzane sikuthole impova. Ngalesi sizathu, abalimi abafuni ukuthi izihlahla zabo ziqhakaze kule nyanga, ngoba bayazi ukuthi ezimweni eziningi izitshalo zisebenzisa amandla ukukhiqiza izimbali ngeze.
Isithwathwa ngoFebhuwari kuhle uma kusenesikhathi: Uma likhithika ekuqaleni kwenyanga, izitshalo ngeke zilimale kakhulu ngangokunokwenzeka engxenyeni yesibili kaFebhuwari.
Ukukhanya kwelanga ngoFebhuwari akuvamile ukuhlala usuku lonke: Izinsuku ezinhle zelanga likaFebhuwari kaningi zingabalwa eminweni yesandla esisodwa. Izulu kalicaci njalo.
Woza imvula ngoFebhuwari noma ngabe iphuma ithukuthele: Imvula iyadingeka kakhulu ukuze izitshalo zikhule futhi zithele izithelo, ngakho-ke uma lina ngoFebhuwari, okuyilapho ziqala ukuphuma khona ebusika, zizokwazi ukukhula zikhule ngaphandle kwezinkinga.
Febrerillo el mocho ngezinsuku zakho ezingamashumi amabili nesishiyagalombili; ubungeke uhlanye uma unezinsuku ezimbalwa: kunabantu abaningi abangathandi lutho kule nyanga, njengoba kukhonjisiwe ezishozweni.
UFebruwari yinyanga ekhohlisayo: enye ibinzana lokuhlakanipha okuthandwayo okusikhombisa ukuthi ayithandeki kanjani le nyanga.
NgoFebhuwari, gcina izinkuni zokubasa ebhokisini lakho lokungena: Ngaphandle kwazo zonke izinguquko ezenzekayo, kubhekwa njengenyanga ebandayo. Inyanga okufanele ihlonishwe ukugwema izinkinga zempilo, ikakhulukazi uma sinamasosha omzimba abuthakathaka.
NgoFebhuwari, izingqimba eziyisikhombisa nesigqoko: Kuyafaneleka futhi ukugqoka isigqoko noma ikepisi ukuze sizivikele elangeni.
Inyanga kaFebhuwari yasungulwa ngumnikazi wendawo: yilokho okuxoxwa ngakho.
NgoFebhuwari, inja ifuna umthunzi: kunezikhathi, noma izinsuku, lapho ilanga lingaba namandla. Ngalezo zikhathi sizobona izilwane zethu ezifuywayo zime ngaphansi komthunzi wezitshalo ezinde noma ngaphansi kwamatafula.
NgoFebhuwari, amakati ashisa: uma isimo sezulu singesihle, amakati angangena ekushiseni ngoFebhuwari. Ngakho-ke uma unayo futhi ufuna ukuyigwema, kunconywa kakhulu ukuyithena 😉.
NgoFebhuwari, ibhere liphuma ebhere lakhe: amabhere yizilwane eziwela ngaphezu komhume emgodini, zilala ubusuku bonke. Kodwa ngoFebhuwari bavuka bahamba bayofuna ukudla.
NgoFebhuwari, inyanga emfushane nezinsuku ezinde: Yinyanga enezinsuku ezimbalwa, kepha futhi kuyinyanga lapho ukwanda kwamahora emini kuqala ukwaziswa khona.
Ngabe zikhona ezinye izisho ozaziyo zenyanga kaFebhuwari?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Februwari Amazwi